Ka hor kulanka galabta dhexmaraya kooxaha Burnley iyo Man City, maxay tahay farriinta uu macallin Klopp gaarsiiyey Ashley Barnes? – Gool FM
Ka hor kulanka galabta dhexmaraya kooxaha Burnley iyo Man City, maxay tahay farriinta uu macallin Klopp gaarsiiyey Ashley Barnes?
(Yurub) 28 Abriil 2019. Galabta waxaa kulan adag oo ka tirsan horyaalka Premier League uu dhexmari doonaa kooxaha Burnely iyo Manchester City.
Kooxda Man City ayaa doonaysa inay guul ka soo gaarto Burnley si ay ugu dagaalanto illaa dhammaadka hanashada horyaalka Premier League, halka kooxda Liverpool iyo taageerayaashoodu ay doonayaan in Burnley ay ugu yaraan taako u dhigto Man City si ay fursad ugu helaan hanashadooda horyaalka Ingiriiska muddo ku dhow 30 sano.
Ashley Barnes oo ka tirsan kooxda Burnley ayaa haatan sheegay in taageerayaasha kooxda Liverpool iyo macallinka naadiga ee Klopp ay farriimo soo gaarsiiyeen si uu galabta ugu qabto Manchester City.
Ashley Barnes oo ka hadlayey kulanka galabta ee dhex mari doona kooxdiisa Burnley iyo Man City ayaa yiri: “Waxaan shalay xoogaa farriimo ah ka helay taageerayaasha kooxda Liverpool iyagoo sameyna kaftan, laakiin dhammaantood waa ay wanaagsanaayeen.”
“Klopp xitaa waxa uu ii soo diray farriin uu iigu sheegayo haddii aan gool dhaliyo kulanka galabta inuu ila soo saxiixan doono xilli ciyaareedka soo socda, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in aan dhaqaaqo” ayuu hadalkiisa ku daray Ashley Barnes.
Haddii ay Burnley galabta taako u dhigto ama ay ka badiso kooxda Man City, naadiga Liverpool ayaa hoggaanka horyaalka Premier League iska sii haysan doonta.
Muxuu ka dhigan yahay kaarkii casaanka ahaa ee uu kooxda Arsenal galabta ka qaatay Maitland-Niles?